विदेशबाट आउँदै हुनुहुन्छ ? यी हुन् भन्सार नतिरी ल्याउन पाइने मोबाइल र समानको लिस्ट !
काठमाडौं : विदेशबाट फर्कने नेपालीहरुमा कानुनी व्यवस्थाको पर्याप्त जानकारी नभएका कारण अपरिचित व्यक्तिले ललाई फकाई विभिन्न सामाग्रीहरु नेपाल पठाउने गरेको पाइएको छ ।
मंगलबार मात्रै त्रिभुवन विमानस्थलमा विदेशबाट आएका मानिसहरुबाट अवै’धरुपमा भित्रिएको करोडौं मूल्य बराबरको सुनका वालाहरु बरा-मद भएको छ । धेरै जसो विदेशबाट फर्किएका कारमदारहरुलाई सामान्य पैसा दिएर अवै-धरुपमा
सुन भित्र्याउने गरिएको पाइएको छ । जसमा सोझसाझा कामदारहरु फस्ने गरेको छन् । सरकारले विदेशबाट फर्किने नेपाली नागरिकहरुले व्यक्तिगत प्रयोगका लागि आफू आएँदा ल्याएको वा आफू आउनु अघिपछि पठाएको सामानमा भन्सार छुट गरेको छ ।
यात्रुले तोकिएको परिणाम भन्दा बढी सामान ल्याएमा त्यस्ता यात्रुको अवस्था परिवार सङख्या बसेको मुलुक र समयाविधलाई ध्यानमा राखी कार्यालयले महसुल जाँचपास गराउने कार्यालयले जनाएको छ ।
विदेशबाट नेपाल फर्किने यात्रूहरुले यी सामानहरु भन्सार नतिरी ल्याउन पाउँछन् । ती समानहरु के के हुन् –
८) मदि-रा १ लिटरसम्मको बोतल १ वटा सम्म ल्याउन पाइने भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले तोकेको परिणाम भन्दा बढी सामान ल्याएमा जफत हुने कार्यालयले जनाएको छ ।
१) टिभि, म्यजिक सिस्टम, रेफ्रि-जेनेरेटर,वासिङ मेसिन, पङ्खा,रेडियो एक सेट
२०७८ चैत्र २३, बुधबार प्रकाशित 1 Minute 609 Views